DB-G type Steel Cord Conveyor Belt ekpepụsị Machine maka Splicing
The DB-G ụdị ígwè eriri ebu ebu ekpepụsị igwe bụ ọhụrụ ụdị nke ígwè eriri ebu ebu ekpepụsị akụrụngwa nyochara na mepụtara site na anyị ụlọ ọrụ onwe ha. E kere ya ụzọ abụọ: ụdị nkịtị na ụdị ịgbawa mgbawa. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, arụmọrụ dị elu, na ike ọrụ dị ala. Ọ nwere ike mezue ọrụ ịkpụchasị ụdị dị iche iche nke eriri eriri ígwè. Ọ bụ ngwa enyemaka inyeaka maka nkwonkwo nkwonkwo ígwè dị iche iche, nke a na-eji eme ihe dị iche iche. N'ụlọ mbụ na nke ụwa na-eduga.
Nkewa n'etiti nkpuchi mkpuchi elu, roba mkpuchi ala, eriri roba na eriri waya nke eriri ígwè dị iche iche.
Akpa Nkpuchi Rubber maka Belt Vulcanizing Press Machine
Antai Rubber Pressure Bag adopts zuru roba imewe, ọ dịghị ígwè etiti, fechaa na mgbali ekesa ọzọ evenly, n'ụzọ dị irè na rụọ ọrụ nke ọma. A na-etinye ya na nrụgide mmiri na ọnọdụ ikuku ikuku. Ọ bụ ụlọ ọrụ R&D nke Antai ji aka ya mepụta ya. A na-enwe ekele dị mma na arụmọrụ na ahịa dịgasị iche iche n'ụwa niile. Ọ bụ ezigbo nhọrọ iji dakọtara na Almex vulcanizing press n’ụzọ zuru oke.
Anyị ụlọ ọrụ R & D ngalaba kere 5 afọ na ihe ịga nke ọma mepụtara roba elu-nsogbu mmiri akpa ke 2005. Nke a amamihe technology agbanwewo nnọọ ụdị nile nke ebu belt vulcanizing pịa technology na n'ụzọ zuru okè dochie ochie-emepụta vulcanizing pịa haịdrọlik efere. Mmetụta nkwonkwo ahụ ruru ogo ọhụrụ. Igwe "vulcanizing" ANTAI "nwere ọnọdụ na-eduga n'ọsọ mpi ahịa yana isi teknụzụ ya na ogo ya.
Cond Cold Bond maka Rubber Conveyor Belt Splicing nrapado
Antai TM 2020 Cold Bond Cement nakweere German teknụzụ dị elu na usoro. Emere ya ka ọ bụrụ simenti na-agwọ ngwa ngwa maka ijigide eriri na roba. Ọ bụ ezigbo nrapado nke eriri splicing, patching na ụdị nile nke roba ationgha, ọbụna n'okpuruala.
Mgbe ị na-eji TM 2020 Cold Bond Cement, ọ na-achọkarị akụkụ abụọ iji rụchaa ọrụ ahụ n'ụzọ zuru oke. Nke mbu, otutu oku na-agwọ chloroprene na-adabere na nrapado roba. Nke abuo, mgbe etinyere ya na ezigbo ike, ọ na-eweta adhesion dị elu na-enweghị enyemaka nke kpo oku, nrụgide ma ọ bụ akụrụngwa ndị ọzọ. Ciment TM 2020 nwere ike ijikọ roba na igwe, rọba na roba, roba na faiba glaasi, roba na akwa, yana ntanye, ịbịanye na ndozi nke eriri ebu roba. O nwekwara ike itinye n'ọrụ imirikiti ihe ndị na-arụzi roba, ndozi na ịmachi.
Mgbe ọrụ ọ bụla gbasara roba na igwe, rọba na roba, roba na fiberglass, roba na akwa, TM 2020 Cold Bond Cement bụ ezigbo nhọrọ.
Edge Mmezi Vulcanizing Press maka Rubber ebu eriri Ndozi
Edge Mmezi Vulcanizing Press maka Rubber Conveyor Belt, ihe eji ebu roba na-arụzi igwe, bụ nke a na-ejikarị emezi obere mpaghara nke eriri ebu, mmebi mgbapu, karịsịa kwesịrị ekwesị maka ịrụzi ebe anya mmiri na mmebi dị ogologo na ntụziaka ogologo oge, nrụzi ọkọ, eriri etiti mmezi, wdg Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ngwọta maka nrụzi vulcanization ọkụ, ezigbo onye inyeaka maka mmezi nke elekere nke eriri ebu. Ọ’s dị mfe iji rụkwaa eriri ebu na saịtị. Ọ’s na-echekwa oge, rụọ ọrụ nke ọma na enyi na enyi.
Rail-n'ịnyịnya Abù Repair Vulcanizing Press maka ebu echebe
Rail-n'ịnyịnya Abụọ Mmezi Vulcanizing Press maka ebu echebe, a roba ebu belt ntụpọ splicing na idozi igwe ma ọ bụ ngwá ọrụ, na-eji maka ịrụzi n'akụkụ ma ọ bụ n'etiti roba ebu belt.
Uru nke akụrụngwa a bụ na a na-eme ka ikpo oku kpo oku, nke dị mma maka idozi obere mmebi n'etiti eriri ebu.
E nwere ọtụtụ kpo oku platen nha maka oke, 300x300mm, 200x200mm, wdg.
Ndị ahịa nwere ike ịgwa anyị mkpa ha maka ọrụ, yabụ anyị nwere ike ịhazi igwe dịka ezigbo mkpa ọrụ.
C-mwekota Mmezi Vulcanizing Press maka Rubt Belt Abọ Ndozi
YXhydraulic ntụpọ na-ekwu igwe mmezi, makwaara dị ka C-clamp ntụpọ idozi vulcanizer, bụ ọkụ eletrik mmezi ihe maka eriri ebu. N'oge eriri na-erute, elu nke eriri nwere ike mebiri ma ọ bụ eduat site ibugaihe ed. Mgbe ahụ ntụpọ na-ekwu igwe mmezi enwere ike iji dozie ya.
Igwe ahụ nwere etiti, efere ọkụ abụọ, ihe ikuku hydraulic agbakwunyere na controbox eletriki. Eku ka nke igwe aluminom siri ike, ya’s ntakiri, obere, nchekwa na a pụrụ ịdabere na ya. A na-etinye igwe akụrụngwa a iji rụkwaa ihe na-erughị 300 * 300mm dot dot.
Ezubere maka ịrụzi ngwa ngwa na ịrụ ọrụ dị mfe na mmebi ntụpọ;
Duawheels Design, mee ngwangwa ka ọ dị mfe;
Light na rugged aluminum C-type frame, adabara n'ọnọdu mebiri emebi ntụpọ ebe;
Ọ bụrụ na mpaghara mmebi eriri adịghị oke buru ibu, dị ka ntụpọ, ntụpọ ma ọ bụ obere obere, ịkwesighi iji igwe buru ibu rụzie ya. C-mwekota ntụpọ idozi vulcanizing pịa ga-abụ ezigbo nhọrọ. Lower mmefu ego, ma idozi nnukwu nsogbu.
PU ịkwanyere echebe Vulcanizing Press maka Thermoplastic echebe Splice
Igwe ikuku a nke ikuku nwere ihe mejupụtara ya n'otu ngwaọrụ, nke na-eme ka igwe rụọ ọrụ dị mfe ma dịkwa njikere maka ọrụ. Gba ọsọ ọsọ na obere ngwa, ị nwere ike iweta ya n'ebe ọ bụla dị mfe.
Fechaa Vulcanizing Press maka Light Rubber ebu echebe
Fechaa roba ebu belt vulcanizing pịa, 2-mpempe pịa, aluminum etiti style, Ezubere maka ngwa na mfe ọrụ, mfe ịkwaga n'ebe ọ bụla chọrọ splice ọnọdụ, fechaa na elu ọrụ arụmọrụ. S
Igwe osisi aluminom abụọ nke siri ike ma sie ike mejupụtara akụkụ nke elu na ala. Ejiri ya rụọ ọrụ mpịachi abụọ na nsọtụ abụọ nke etiti dị n’elu, ọ dị mfe ịkwaga na ala. Ogwe njikwa na-achịkwa njikwa okpomọkụ abụọ, ngụ oge na usoro ngosi.
Ezubere maka ngwa ngwa ngwa ngwa na ịdabere na belt;
Siri ike aluminom etiti ụdị;
Fechaa, obere efere pịa;
Ngwa ngwa ngwa sistemụ, jiri ihe eji egwu Silicone Heating;
Usoro ngwangwa dị ngwa etinyere na imewe platen, jụrụ site na 145 Celsius ruo 75 Celsius C, naanị 5 Nkeji.